Diabetes mellitus type 2 Somalisch - Voorlichting Vertaald
Diabetes mellitus type 2 Somalisch
Home huisarts Diabetes mellitus type 2 Diabetes mellitus type 2 Somalisch
Sonkorowga - nooca 2
Waa maxay cudurka macaanka
● Nooca 2-aad ee xanuunka sonkorowgu waa xaalad keenta in heerka sonkorta (glucose) ee dhiiga uu aad u sarreeyo.
● Waxay keeni kartaa calaamado ay ka mid yihiin harraad xad dhaaf ah, in aad u baahato in aad kaadiso iyo daal . Waxa kale oo ay kordhin kartaa khatarta ah in aad dhibaatooyin halis ah ku dhoco indhahaaga, wadnahaaga iyo neerfahaaga.
● Waa xaalad saamayn karta noloshaada oo dhan iyo nolol maalmeedkaaga . Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad beddesho cuntadaada, inaad daawo qaadato iyo in aad baaritaan joogto ah sameyso.
● Waxaa keena dhibaatooyin kiimiko ah oo jirka ku jira (hormoon) oo loo yaqaan insulin . Badanaa waxay ku xidhan tahay miisaanka oo xad dhaaf ah ama firfircooni la'aanta, ama inaad leedahay taariikh qoyskaaga ee nooca 2aad ee sonkorowga.
Dad badan ayaa qaba nooca 2-aad ee xanuunka sonkorowga iyagoon ogayn. Sabatoo ah calaamadahan kuma dareensiinayaan inaad caafimaad darro qabto.
Calaamadaha nooca 2-aad ee sonkorowga waxaa ka mid ah:
● inaad kaadiso in ka badan sidii caadiga ahayd, gaar ahaan habeenkii
● inaad haraad dareento mar kasta
● dareen daal badan
● miisaanka oo yaraada adigoon isku dayin
● cuncun agagaarka xubinta taranka raga ama dumarka, ama si isdaba joog ah inaad u qaado xanuunka cabeebka ee xubinta taranka ku dhaca
● boogo ama nabarrada oo aan ku bogsanayaan muddo dheer
● aragti cakiran
Waxaad halis badan ugu jirtaa inuu kugu dhaco nooca 2aad ee sonkorowga haddii aad:
● ka weyn tahay 40 sano (ama 25 sano dadka koonfurta Aasiya)
● inaad leedahay qaraabo dhow oo qaba cudurka sonkorowga (sida waalid, walaalkaa ama walaashaa)
● inaad leedahay cayil ama cayil saa’id ah
● asal ahaan ka soo jeedo Aasiya, Afrikaan-karibiyaan ama Afrikaan madow (xitaa haddii aad ku dhalatay UK)
Nooca 2-aad ee xanuunka sonkorowgu waxa uu leeyahay sababo badan oo keena sida:
● Sigaar cabid
● Jimicsi aan kugu filnayn
● Miisaan badan
● Cunista cunto aan caafimaadka lahayn
Maxaad samayn kartaa
Cunto caafimaad leh iyo firfircoonida ayaa kaa caawin doonta inaad maareyso heerka sonkorta dhiiggaaga.
Waxay kaloo kaa caawin doontaa inaad xakamayso miisaankaaga oo aad si guud ahaan u dareento fiicnaan.
Waxaad cuni kartaa noocyo badan oo cunto ah
Ma jiraan wax aadan cuni karin haddii aad qabto nooca 2-aad ee sonkorowga, laakiin waa inaad xaddidaa cuntooyinka qaarkood. Waa in aad:
Cun cuntooyin kala duwan - oo ay ku jiraan miro, khudaar iyo qaar ka mid ah cuntooyinka istaarijka ah sida baastada
Iska ilaali sonkorta, baruurta iyo milixdana aad u yaree
Cun quraac, qado iyo casho maalin kasta - ha ka boodin cuntada
Haddii aad u baahan tahay inaad beddesho cuntadaada, waxaa laga yaabaa inay kuu fududaato inaad isbedel yar samayso toddobaad kasta.
Firfircoonidu waxay hoos u dhigtaa heerka sonkorta dhiiggaaga
Jimicsiga jirka wuxuu kaa caawinayaa inaad hoos u dhigto heerka sonkorta dhiiggaaga. Waa in aad higsato 2.5 saacadood oo waxqabad todobaadkii. Meel kasta waad ka fir-fircooni kartaa ilaa inta waxa aad samaynayso ay neefta kaa saarayso. Tani waxay noqon kartaa:
Socod degdeg ah
samaynta shaqooyinka guriga ee aadka u adag, ama beerida beerta
Miisaankagu waa muhiim
Miisaanka oo hoos u dhaca (haddii aad cayilan tahay) waxay u sahlaysaa jidhkaaga inuu hoos u dhigo heerka sonkorta dhiiggaaga, waxayna hagaajin kartaa bereesharka dhiiggaaga iyo kolestaroolkaaga. Haddii aad u baahan tahay inaad lumiso miisaankaaga, waxaa dadka intooda badan lagula talinayaa inay si tartiib ah u sameeyaan illa wakhti. Higo inaad qiyaastii 0.5 ilaa 1kg todobaadkii iska dejiso.
Waxaa jira caddayn ah in cunista cunto kalori yar (800 ilaa 1,200 kalori maalintii) muddo gaaban (qiyaastii 12 toddobaad) ay kaa caawin karto inay kaa yarayso calaamadaha nooca 2 ee sonkorowga. Cunto kalori yar maaha mid badbaado leh ama ku habboon qof kasta oo qaba nooca 2aad ee sonkorowga, sida dadka u baahan inay qaataan insulin. Markaa waa muhiim inaad hesho la-talin caafimaad ka hor intaadan cuntada noocaan ah!
Dadka intooda badan waxay u baahan yihiin daawo si ay u xakameeyaan nooca 2-aad ee sonkorowga. Daawadu waxay kaa caawinaysaa in heerka sonkorta dhiiggaaga uu ahaado mid caadi ah intii suurtogal ah si looga hortago dhibaatooyin caafimaad. Waxa laga yaabaa inaad qaadato inta noloshaada ka hadhay. Sonkorowga caadi ahaan wuu ka sii daraa waqti ka dib, markaa dawadaada ama qiyaasta daawada ayaa laga yaabaa inay u baahdaan inay la bedelo. Hagaajinta cuntadaada iyo firfircoonidaada badanaa waa lagama maarmaan si loo yareeyo heerka sonkorta dhiiggaaga. Caadi ahaan waxaa lagu siin doonaa daawo la yiraahdo metformin marka hore. Haddii heerarka sonkorta dhiiggaagu aanay hoos u dhicin ka dib qaadashada metformin, waxaad u baahan kartaa daawo kale. Waqti ka dib, waxaa laga yaabaa inaad u baahato daawooyin isku dhafan. Takhtarkaaga guud ama kalkaalisada sonkorowga ayaa kugula talin doona daawooyinka kuugu habboon. Insulinta inta badan looma isticmaalo nooca 2-aad ee sonkorowga sanadaha hore. Caadi ahaan waxa loo baahan yahay marka dawooyinka kale ay shaqayn waayaan.
Takhtarkaaga guud ama kalkaalisada sonkorowga ayaa kuu sharxi doona sida loo qaato daawadaada iyo sida loo kaydiyo. Haddii aad u baahan tahay inaad isku durto insulin, waxay ku tusi doonaan sida la isugu duro.
Daawadaada sonkorowga ayaa laga yaabaa inay keento waxyeelo. Kuwaas waxaa ka mid :
dibiraad iyo shuban
miisaanka oo yaraada ama kordha
dareen inaad jirantahay
barer hal meel ama in ka badan jidhkaaga kamid ah oo ay ugu wacan tahay dareeraha maqaarkaaga hoostiisa oo urusama
Qof kastaa ma laha waxyeellooyinkan. Haddii aad dareento caafimaad darro ka dib qaadashada daawada ama aad aragto wax saameyn ah, la hadal GP-gaaga ama kalkaalisada sonkorowga. Ha joojin qaadashada daawada adoon helin talo.
Goormaa la aadaa Dhakhtarka
waxaad leedahay mid ka mid ah calaamadaha cudurka sonkorowga nooca 2
waxaad ka werwersantahay inaad halis sare ugu jirto inaad qaaddo nooca 2aad ee sonkorowga
Dhakhtarka GP-ga ayaa baara cudurka sonkorowga. Waxaad u bahnaan doontaa baritaan dhiig, oo laga yaabo inaad u tagto isbitaalka degaankaaga haadii aan lagu sameen karin kiliinikada GP-gaaga